Horudhac: Liverpool vs Man United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Premier League ee caawa ka dhacaya Anfield) – Gool FM
(Liverpool) 17 Jan 2021. Kulanka ugu weyn sanadkan Ingiriiska ayaa caawa ka dhacaya garoonka Anfield, iyadoo kooxda xafidanaysa Premier League ay soo dhoweynayso hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Manchester United.
Labada kooxood ee ugu guulaha badan taariikhda kubadda cagta Ingiriiska ayaa kaalimaha hore kaga jira miiska kala sarreynta horyaalka, iyadoo Man United ay saddex dhibcood ka sarreyso naadiga ka dhisan Merseyside-ka.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 07:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika
Daafaca Liverpool ee Joel Matip ayaa ku dhow inuu si buuxda garoomada ugu soo laabto, isagoo ka soo muuqday tababarkii ugu dambeeyey, waxaana go’aan laga gaari doonaa haddii uu ku soo bilaabanayo safka hore ee kooxda martida loo yahay.
Naby Keita ayaa markale garoommada ka soo maqnaan doona, si la mid ah Joe Gomez, Diogo Jota iyo Virgil van Dijk.
Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyey inuu meesha ka saaray Phil Jones iyo Brandon Williams oo ay seegi doonaan kulankan.
Marka laga soo tago iyaga, wuxuu sheegay Macallin Ole inuu fursad siin doono qof walba si uu u muujiyo taam ahaanshahood, waxaana xiddigahaas ku jira Anthony Martial, Nemanja Matic iyo Victor Lindelof.
>- Manchester United ayaa kaliya hal mar guuleysatay 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahaday Liverpool tartammada oo dhan, waxaana kulankaasii uu ahaa kulan horyaalka ah oo ku dhammaaday 2-1 kaasoo ka dhacay garoonka Old Trafford, isla markaa dhacay bishii Maarso ee sanadkii 2018.
>- Red Devils ayaa afar kulan horyaalka ka badin la’ Liverpool, waxaana ay labo kulan ku dhammaadeen barbaro halka labada kulan ee kale ay guuldarro la kulantay Man Utd, waana heerkii ugu dheeraa tan iyo bishii Maarso 2000 illaa Janaayo 2002.
>- Liverpool ayaa dooneysa inay guuleysato saddex kulan oo horyaalka ah oo isku xiga oo ay garoonkeeda ku wajahdo Manchester United markii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedyadii 2008-09 ilaa 2010-11.
>- Liverpool ayaa lumisay 18-dhibcood xilli ciyaareedkan, waana in ka badan inta ay lumiyeen guud ahaan labadii xilli ciyaareed ee kal ciyaareedkan ka horreeyey.
>- Waxay halis ugu jiraan inay lumiyaan kulammo isku xigxiga ee horyaalka markii ugu horeysay tan iyo bishii Agoosto ilaa Sebtember 2015 xilligaas oo uu hogaaminayay Kooxda Macallin Brendan Rodgers, khasaaraha labaad ayaa ahaa guuldarro 3-1 oo ka soo gaartay Manchester United.
>- Reds kuma aysan bilaabanin sanad taariikhi ah guuldarrooyin xiriir ah horyaalka tan iyo sanadkii 1993-kii.
>- Tababare Jurgen Klopp ayaan guuldarrooyin xiriir ah la kulmin horyaalka isagoo tababare ah tan iyo bishii April sanadkii 2015-kii, markaasoo uu ku sugnaa kooxda Borussia Dortmund.
>- Liverpool ayay ugu dambeysay saddexdii kulan ee horyaalka iyagoo aan wax goolal ah dhalin bilihii Febraayo iyo Maarso ee sanadkii 2005, halka koox uu maamulo Klopp aysan wax gool la’aan ah la kulmin saddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah tan iyo bishii November ilaa December ee sanadkii 2006 markii uu joogay Mainz.
>- Caawa Klopp ayaa noqonaya tababarihii 10-aad ee gaara 200 oo kulan oo Liverpool ah, iyadoo macalinka reer Jarmal uu guulo badan ka gaaray dhammaan kooxihii ka horreeyay isla heerkaas.
>- Waa markii ugu horreysay oo ay Manchester United hoggaanka u qabato horyaalka kaddib in ka badan 17 kulan oo xilli ciyaareedka ay ciyaareen tan iyo maalintii ugu dambaysay ololahooda hanashada horyaalka ee xilli ciyaareedkii 2012-13, markaasoo uu hoggaaminayey Macallin Sir Alex Ferguson.
>- Waxa ay guuldarro la’aan yihiin (unbeaten) 11 kulan oo horyaalka Premier League ah tan iyo markii ay guuldarro kala kulmeen Arsenal 01 bishii November.
>- Red Devils ayaa doonaysa inay guuleysato in ka badan toddobo ka mid ah sagaal kulan oo furitaanka oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda xilli ciyaareed horyaal ah markii labaad oo kaliya, iyagoo ku dayanaya xilli ciyaareedkii 1993-94, waxay ku guuleysteen siddeed kulan oo horyaalka ah iyagoo ku ciyaarayey meel ka baxsan garoonkooda xilli ciyaareedkii hore oo dhan.
>- Ma aysan guuleysan mid ka mid ah afartii kulan ee ay ciyaareen xilli ciyaareedkan kooxaha kale ee lixda ah ee ugu sarreeya, (2 barbaro iyo 2 guuldarro), dhammaan afarta kulanba waxay ahaayeen garoonka Old Trafford, goolka kaliya ee ay dhaliyeenna wuxuu ahaa rigoore uu u dhaliyey Bruno Fernandes.
>- Bruno Fernandes waa ciyaaryahankii ugu horreeyey abid ee xiddiga bisha ee Premier League ku guuleysta hal sano gudihiis.
>- Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa indhaha ku haya inuu ka fogaado kaliya macallinkii saddexaad ee Manchester United oo ku guuldarreysa inuu guul gaaro afartiisa kulan ee ugu horreeya horyaalka oo uu la ciyaarayo Liverpool, kaddib John Chapman (1921-26) iyo Tommy Docherty (1973-76).